Nzwisiso yemepu | Kwayedza
03 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-02T18:14:39+00:00 2020-01-03T00:00:32+00:00 0 Views
SVONDO rino tichaongorora mepu.
Kana uri mudzidzi wefomu yekutanga kusvika yechina, wakasununguka kupinda mumakwikwi aya kuburikidza nekutumira mhinduro dzako uchipindura mibvunzo iri pazasi apa.
Unofanira kuisa zita rako rizere, chikoro chaunodzidza, fomu yauri nenzvimbo yaunogara panhare dzeKwayedza dzinoti 0714 200 007 kana 0772 491 827 kana email inoti [email protected]
Anopindura mibvunzo inobuda muchikamu chino zvakanaka kaviri kakatevedzana pamwedzi achawana mubairo webhuku idzva rekuverenga rinonzi “Imbwa Yemunhu” rakanyorwa neshasha Ignatius T. Mabasa.
Ongorora mepu iri pazasi apa ugopindura mibvunzo inotevera.
Mepu iyi inotsanangura zvakawanda maererano nenhaka pamwe chete neupfumi hwezvimwe zviwanikwa zvemuZimbabwe. Dzimwe nzvimbo dzine mukurumbira munyika dziri kuburitswawo pamepu apa dzichimirira humwe hupfumi hunowanikwa madziri.
Mepu iyi ndeyenyika ipi? 
Guta guru renyika yacho rinonzii? 
Doma nzvimbo ina chete dzabuda pamepu dzinochengeterwa mhuka. 
Doma mazita mana enyika dzabuda dzakakomberedza nyika iri pamepu. 
Zvivakwa zveGreat Zimbabwe National Monuments zvinowanikwa muguta ripi raburitswa pamepu? 
Munzvimbo yeVictoria Falls mune chiwanikwa chipi chakasikwa naMwari chine mukurumbira pasi rose? 
Nyika inobatsirikana nenzira dzipi kubva kuchiwanikwa ichi? 
Gomo reNyangani rakareba zvinhambwe zvingani kubva pasi richienda mudenga? 
Binga iri pedyo nerwizi rune mukurumbira runonzi chii? 
Doma nzvimbo huru inochengeterwa mhuka inowanikwa kumadokero kwenyika. 
Nzvimbo yeMatobo yakakosherei kuzvizvarwa zvenyika? 
Nderipi guta guru renyika imwe chete yakakomberedza nyika iri pamepu raburitswa? 
Kubva pamepu, Mt Selinda inzvimbo inowanikwa munyika ipi? 
Zvii zvingaitwa nenyika iri pamepu kuchengetedza mhuka dzesango? 
Nyora pfupiso yemepu iyi nemazwi asingapfuuri makumi mashanu. 
Mhinduro dzenyu dzese dzamunotumira tinodziburitsa svondo rinouya pamwe chete nemhinduro dzinenge dzichitarisirwa.